Mampahalasa adala ny mpanao didy jadona ao Belarus ireo mpanao antso sangy ratsy amin’ny finday · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2019 3:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Deutsch, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jiona 2014)
Lukashenko sy Bart Sympson. Sary namboarin'i Andrey Tselikov. Lukashenko and Bart Sympson. Images remixed by Andrey Tselikov.
Mety ho faly ireo mpankafy ny antso sangy ratsy ataon'i Bart Simpson amin'ny Tavern an'i Moe raha mahita fa manana vondrom-piarahamonina antserasera goavana natao hanao antso sangy ratsy i Rosia, tsy ny rehetra no tsy manan-tsiny. “Prankery” na “prankers” dia zana-kolontsaina antserasera tena mavitrika, niorina tsara tamin'ny taona 2009, raha nosokajian'ilay antrôpôlôgista an-drenivohitra, Mikhail Alekseevskiy ao amin'ny Akademia Rosiana Momba ny Siansa tao anatin'ny angon-dahatsoratra momba ny “Zana-kolontsain'ny tanora ao Moskoa”.
Na dia mitovy amin'ny antso vazivazy tsotra ataon'ny maro aza ny endriny hatramin'ny nahatongavan'ny telefaonina, dia nipaka tany amin'ireo mpihaino marobe tsy toy ny mahazatra ireo mpanao sangy ratsy an-telefaonina tamin'ny alalan'ny famoahana ny vokatry ny antso nataon'izy ireo tao amin'ny aterineto, voalohany tao amina forum manokana, avy eo tao amin'ny tambajotra sosialy toy ny VKontakte. Tamin'ny taona 2009, liana kokoa tamin'ny fitadiavana ny olo-tsotra mpanao sangy ratsy izy ireo – indrindra indrindra amin'ireo vehivavy sy lehilahy efa antitra, izay antsoin'izy ireo hatrany hatrany, mitondra azy ireo amin'ny sehatra vetaveta, izay raketina sy avadika ho “meme” eo an-toerana. Raha ny marina, dia faritana toy ny “fandotoana eo amin'ny fiainana tena izy” izany – mitovitovy amin'ny tabilaon-tsary tahaka ilay malaza ratsy an'ny 4chan / b /.
Na dia talohan'izany aza, nanao sangy ratsy tamin'ireo olo-malaza ireo mpanao antso sangy ratsy, ary nanjary malaza izay tena nahomby indrindra tamin'izy ireo. Isan'ireo malaza ny mpanao antso sangy ratsy antsoina hoe “Vovan”, mpikambana ao amin'ny sangany mpanao antso sangy ratsy sady mpandoto misy ambadika politika izay mifantoka amin'ny antso an-tariby mampihomehy atao amin'ireo olona malaza. Tamin'ny taona 2011, ohatra, niantso ny lehiben'ny Komitin'ny-pifidianana Rosiana, Churov izy, nilaza fa antso avy amin'ny Fiadidian'ny Filoha ary nandroaka azy tamin'ny alalan'ny finday. Tamin'ity lohataona ity, niantso ny mpampanoa lalàna vaovao, Natalia Poklonskaya ao Crimée i Vovan, nilaza ihany koa fa antso avy amin'ny biraon'ny filoha izany, ary nangataka azy mba haka sary ao Maxim.
Vao haingana, na izany aza, mety nihoatra ny fefy i Vovan, raha niantso an'i Aleksandr Lukashenko, filoha Belorosian, nilaza fa zanaky ny Filoha Okrainiana voahongana, Yanukovich Victor. Nandritra ny antso, nangataka tamin'i Lukashenko mba hahazo fialofana ara-politika ho an'ny rainy ilay zanaka lahy sandoka. Nanaiky i Lukashenko. Saingy rehefa nahita i Lukashenko fa niharan'ny antso sangy ratsy izy, dia toa nanome “herinandro” ho an'ny fiarovany izy mba hikaroka an'i Vovan ary hitondra azy amin'ny endrika fitsarana. Koa satria azo inoana fa olom-pirenena Rosiana i Vovan, dia tsy mazava izay hiafaran'ny fitsarana tahaka izany.
Mahaliana fa raha niaiky ho nanao antso tao amin'ny pejiny VKontakte i Vovan, dia nilaza koa izy fa tsy anisan'ny namoaka izany tamin'ilay mpanao gazety Okrainiana Mustafa Nayem (izay namoaka ny vaovao voalohany). Raha ny marina, dia nilaza i Vovan fa nanomboka talohan'ny nanaovany antso ilay fandraketana manokana navoaka tamin'i Nayem, ary toa tsy nahalala i Nayem fa antso sangy ratsy izany. Izay niteraka tsoa-kevitra lojika, hoy i Vovan, fa nisy olona nihaino ny resaka an-tariby an'ny Filohan'i Belarosia. Antso sangy ratsy ihany koa ireo fihainoan-dresaka an-tariby ireo:
Nanao fahadisoana ireo mpihaino ireo – tsy fantany fa tsy niresaka tokoa tamin'ny zanaka lahin'i Yanukovich i Lukashenko ary nihevitra fa tena izy ny resaka natao. Taorian'izany, angamba navoakan'izy ireo tany amin'ny fahefana ao Kiev ilay fandraketana. Izay, avy eo, noho ny tsy fahafantarana fa “scam”, dia namoaka ity resaka “mampitolagaga” ity tany amin'i Nayem, izay akaiky azy ireo.
Raha marina izany, ary mora miteraka tantara ratsy iraisam-pirenena, dia angamba tafiditra ao anatin'ny tontolo vaovaon'ny antso an-tariby sangy ratsy isika. Antenaina fa afaka hanohy ny “Barts” Rosiana.